-Dhacdo Daadadka LED-ka ee Jumlada ah, RAD-FL208, Kiis aluminium-ka-dhimista ah+Muraayadaha dusha adag ee marada, Dirawalka goonida ah 85-265V, PF>0.9, IP65, Soo-saare iyo Soo-saare 2years |Radlux
Iftiinka Daadka ee LED, RAD-FL208, Kiis aluminium-ka-dhimista ah + Dhalada dusha adag ee marada, Darawal gooni ah 85-265V, PF> 0.9, IP65, 2years
Iftiinka daadka ee RAD-FL208 wuxuu ku jiraa guryaha aluminiumka ah ee Die-cast iyo muraayad adag oo cad.
Isha iftiinka ayaa laga sameeyay SMD2835, watt la heli karo waa 30W ilaa 200W.Heerkul midab kala duwan oo badan oo kala duwan ayaa ah 2000-6500K iyo RGB.
Dareewal joogto ah oo go'doonsan 85-265V, darawalka 30W waa 2500V ilaalinta hillaaca, 4000V ilaalinta hillaaca 50W-200W.
Qaabka RAD-FL208-30W RAD-FL208-50W RAD-FL208-100W RAD-FL208-150W RAD-FL208-200W
Nidaamka Watt 30W 50W 100W 150W 200W
Qodobka Awoodda PF≥0.5,PF≥0.9
Tilmaamaha Alaabta 1, Guryaha aluminium-ka-saarista, daadinta kulaylka wanaagsan.
* Bixinta & Bixinta:
Muddada lacag bixinta ee la aqbalay waa T/T, L/C marka la eego, sida caadiga ah wakhtiga bixinta waa 30 maalmood ka dib bixinta hore ama nuqul L/C ah oo la helay.
Tayo wanaagsan, qiimo wanaagsan, adeeg wanaagsan iyo gaarsiin degdeg ah
Hore: LED Mold Tunnel Light, RAD-TL603, Singel 100W caaryada, Kiiska aluminium-ka-dhimista + muraayadaha PC, Darawal 85-265V ah, 4000V hillaac
Iftiinka daadka ee LED, RAD-FL212, aluminium-dhimista
Iftiinka daadka ee LED, RAD-FL210, aluminium-dhimista
Iftiinka Daadka ee LED-ka khafiifka ah, RAD-FL202, Die-casting alu...
Iftiinka daadka ee LED, RAD-FL211A, aluminium wax shubaya...